အခုခေတ်ကလေးများ အတော်စကားတတ်တာဘဲ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အခုခေတ်ကလေးများ အတော်စကားတတ်တာဘဲ ….
အခုခေတ်ကလေးများ အတော်စကားတတ်တာဘဲ ….
Posted by fatty on Aug 22, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 21 comments
ကျနော့သားကြီး အခု ဖတ်စ်စမက်စတာ ဖြေနေရပြီ ပြီးရင် ကျောင်းတစ်လပိတ်မယ် ….။
ကျနော်ဖုန်းထဲကနေပြောဖြစ်တယ် …. မင်းပြန်လာမှာမှုတ်လား ….။
ကျနော်ပြန်မလာတော့ဘူးဖေကြီး … ဒီမှာဘဲအလုပ်ဆက်လုပ်ပြီးငွေစုလိုက်အုံးမယ်စိတ်ကူးတယ် …။
မင်းအဲဒီမှာနေတော့ ကုန်ကျစားရိတ် မများပေဘူးလား …။
ဖေကြီး .. သားပြန်လာလဲ လေယာဉ်ခ ကုန်အုံးမယ် … ပြီးတော့နေနေ မနေနေ အိမ်ငှားခကပေးရမှာဘဲလေ ..။
အမှန်ကတော့ ကျနော်သားကိုလွမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လာစေချင်သည်။ သားမျက်နှာတွေ့ချင်သည်။
ဖေကြီးဆိုလိုတာက … မင်း exam အတွက် အတော်လေးပင်ပန်းနေပြီ ..။
ပြန်လာပြီးအနားယူပါလားကွ ချာချင်ပြန်သွင်းတာပေါ့ကွာ .. လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ချင်ရင်လည်း
စားရိတ်စားက နဲနဲနဲ့ တက်လို့ရတာပေါ့ … မဟုတ်ဘူးလား ..။
ဘာသင်တန်းမှမတက်ပါရစေနဲ့တော့ ဖေကြီးရာ စာဖတ်ရလွန်းလို့ မူးနောက်နေပြီ ..။
ဒီအတိုင်းနားမဲ့အတူတူ အလုပ်လေးတဖက်နဲ့ဆိုတော့ … ငွေလဲရ အပေါင်းအသင်းလဲတိုး ..လေ ..။
မင်းကလည်းကွာ အဖေ့စကားနားထောင်တယ်ဆိုတာကို မရှိဘူး … လခွီးမှဘဲ …။
ဖေကြီးကလည်း… ဘုရားတောင် သူ့အဖေစကားနားထောင်လို့လား …။
ဘုရားသာ သူ့အဖေစကားနားထောင်ခဲ့ရင် အခုချိန်ဘုရားဆိုတာလဲပွင့်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး …
အလွန်ဆုံးဖြစ် စကြာင်္ဝတေးမင်းပေါ့ … ဘုရင်ပေါ့ … ဟုတ်ဘူးလား ..
ကျနော်ဖုံးကောက်ချလိုက်ရပါသည်။ …….. ခွပ်။
ဟဲလို..သား..မင်းပြန်မလာချင်လဲ နေ …။
မိန်းမ ပေးစားမလို့ 
မလာရင် အဖေ ပဲ ယူလိုက်တော့မယ်
(မှတ်ချက်။ ။ သားပြန်မလာနိုင်လို့ပါ ပြန်လာရင် ဒီထက်ပိုကုန်မယ်နော်မှာတာ မြန်မြန်ပို့ပေး…. :P)
(ဟိုးအရင် မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတာလေး)
(ဘုရားတောင် သူ့အဖေစကားနားထောင်လို့လား …။
ဘုရားသာ သူ့အဖေစကားနားထောင်ခဲ့ရင် အခုချိန်ဘုရားဆိုတာလဲပွင့်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး …)
ဒီလိုဆိုတော့လည်းအဟုတ်သား…း) နောက်ရှိသေးတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက သူမိန်းမ ယသော်ဓ၇ာနဲ့ သားကို စွန့်ပယ်ခဲ့လို့လည်း ဘုရားဖြစ်တာ မိန်းမကို မစွန့်ပယ်ရင် ကျွန်တော်တို့လည်းကိုးကွယ်စရာမရှိဖြစ်နေတော့မှာပဲ ဒီတော့ ဦးဖက်သားကိုပြန်ပြောလိုက် မင်းနဲ့ မင်းအမေကိုလည်း ငါစွန့်လွှတ်မယ်လို့
အန်ကယ်ဖက်တော့ ဒီတခါ ဂွမ်းပြီပဲ … ကောင်မလေးတွေက အန်ကယ်ကြီး ခေါ်နေလွန်းလို့ … သားပြန်လာလျှင် လူငယ်တွေ ဘယ်လို နေတယ်ထိုင်တယ် .. ဘယ်လိုပြောဆိုလှုပ်ရှားလဲ အတုယူမလို့ဟာ … ဟိုက သူ့အကြံသိသွားတော့ .. ပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့လေ … ။
လေးဖက်က အဖေ လေယာဉ်စရိတ် အကုန်ခံမယ် ပြောလိုက်ရင်ကော။ ပြန်လာချင် ပြန်လာမယ် ထင်တယ်နော်။
ရှုပ်ပါတယ်.. သားကို အဖေ သတိရလို့.. လက်မှတ်ဝယ် ပို့လိုက်.. အထုတ်ဆွဲပြီးသာ လိုက်သွားပေတော့ အိမ်ငှားထားတာ ဆိုတော့ သားအိမ်မှာ တက်နေ.. စလုံးနဲ့ ဒီက ဝေးတာမှ မဟုတ်တာ.. လိုက်သာ သွား.. ပျော်ပျော်ကြီး သုံးပလိုက်.. နောက်တခါ ပြန်လာဆို ပြန်လာလိမ့်မယ် အထွဋ်မတက်တော့ဘူး။
အိမ်း…..ခု ခေတ် ကလေးတွေများ…။
ခေတ်တို့သည်ပြောင်းလဲနေပြီ … အရင်ကလို အဖေမို့လို့အမိန့်ပေးမည်ဆိုလို့ ရဟန်မတူတော့ …
ရမည်။ Change …. Change ကိုလက်ခံကြရပေမည်။ Change အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တာကို
ပြင်ဆင်ထားကြရမည်။ Change ကိုလက်မခံသေးသောသူများရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါသေးသည်။
မိသားစုအတွင်းအပြောင်းအလဲ တိုင်းပြည်တခုအတွင်းအပြောင်းအလဲ ယုတ်စွအဆုံး မိမိခန္ဓာ၏
သည်ထင်ပါသည်။ သင်ကောဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲ … စဉ်းစားကြရန်အစဖေါ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း။
လေးဖက်ကတော. သားတစ်ယောက်ကို နိုင်အောင်မထိန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော.
သေချာတယ် မယက ဖြစ်ဖို.များနေတယ်နော်
ဒီလိုပါ””. အမေနေကောင်းသားဆုတောင်း ပို့ ငွေငါးသောင်းတဲ့”” အဲလိုမဟုတ်ဘူးလား။မိဘ နဲ့ သားသမီးကြားမှာ ခုလိုဘဲဖြစ်နေကြရစမြဲပါရှင်။
ဦးဖက် သားကို ပြောမရလို့ သဂျီးဆီလာတိုင်နေတာပေ့ါလေ။
မြစ်ဆိုတာ အပြန်မစီးဘူး ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပေ့ါ။ ဝဋ်ဆိုတာ သံသရာမဆိုင်းဘူးတဲ့။ မိဘက လွမ်းနေလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အလှည့်တုန်းကလည်း မစဉ်းစားပေးခဲ့မိဘူး ထင်တယ်။
အလှည့်ကျတော့ မနွဲ့ကြစတမ်းပေ့ါ နော်။
ဦးဖက်က မယက ထက် မထသ ဖြစ်ဖို.ပိုများမှာ…အဖေဆိုတာသားရဲ့လက်ဦးဆရာဆိုတဲ့ အတိုင်းပေ့ါ။
ပေါင်ဖြူဖြူနဲ့ စလုံးမလေးတွေက ဦးဖက်သားကို အိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘူးတော့ဘူးတဲ့။ အဖေလုပ်သူဦးဖက် ပြန်မလာရင် သားဖြစ်သူမောင်ဝထံကနေ တိုးရင်းပေါင်း ဆယ်ဆ ပြန်ယူမယ် ကြိမ်းနေကြတယ်..။ ကျနော်ကတော့ လူလွှတ်ပြီး ဦးဖက်သားအိမ်ခန်းမှာ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တဒါဇင် နေရာမလွတ် တပ်ပြီးသွားပြီ…ရွာသားအပေါင်း အင်တာနက်မှာ မကြာခင်မျှော်…..
ရွှေဘိုသားတွေမိုက်တယ် သတ္တိရှိတယ်နဲ့ ကျုပ်တို့လုပ်မှဘဲ မယက ဖြစ်ပြီးနာမည်ပျက်ကုန်ပါပြီကွာ ….
သူများတွေမသိစေနဲ့ ..။ Thit min ကတော့ အထာနပ်ပုံရတယ် မထသနဲ့နှိုင်းသွားတယ်။
Ma Ma ပြောသလိုပါဘဲ ဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ပြောတာပါ။ အဲ ကျနော်အခု အသက် ၉၀
ကြောင်ကြီးကို အိတ်စ်ကျူ့မီ ဆိုပြီး ဘုတ်အုပ်လှန်စေချင်လို့ … ဒီတခါ ဘာသွားလှန်နေလဲတော့မသိဘူး
မိသားစုအတွင်းပြောင်းလဲလာတာလေးကို တို့ထားတာပါ။ ပြောင်းလဲမှု စီမံခန့်ခွဲရေးအကြောင်းနားလည်သူများရေးပေးကြပါလား ….။
ဟာာ.. ဒါ ဆိုဦးဖက် မှာ သား၇ှိတယ်ပေါ့.. ကြိုမပြောဘူး.. သူ့သားကို ဝှက်ထားတယ်..။ဘာလဲ ယေက္ခမ အခေါ်ခံ၇မှာ စိုးလို့နဲ တူတယ်… ယောက္ခမ ကြီး….. ဟီး………
အဖေ့ထက်မေတ္တာပေးနိုင်တဲ့သူတွေ့လို့နေမှာပေါ့ 2028 မေတ္တာလေ
အဖေဆိုတာလဲတချိန်ကသားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သားဟာလည်းတချိန်မှာ အဖေဖြစ်လာမှာပါ။ ကိုယ်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမိဘတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို အပြည့်အ၀နားလည်မပေးနိုင်သလို ကိုယ်ရဲ့သားဟာလည်း မိဘတွေရဲ့ခံစားချက်ကို အခုချိန်မှာ အပြည့်အ၀နားလည်ဖို့ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူဟာအဖေဖြစ်လာချိန်မှာတော့ နားလည်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ nature ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။